Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNina
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uNina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Renta i-alpine chalet epholileyo kwiVelika planina - esLOVEnia. Yiba ne-chalet yakho kwaye uthande ubuhle bendalo! Thatha umoya onzulu womoya omtsha kwaye wonwabe kwimisebenzi yangaphandle, thanda intaba / ukuphuma kwelanga / ukutshona kwelanga, ndwendwela ilali yabelusi kwaye ungcamle ukutya kwasekhaya. I-Chalet ifumaneka kwiVelika planina. Ungafika apha kuphela nge-cablecar kunye ne-doubleseat lift. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.
I-Chalet Lepenatka intle, ipholile, ifudumele kwaye i-nostalgic cottage kwi-Velika planina. IVelika planina yenye yezona ndawo ziphambili eSlovenia. Iyaziwa ngoyilo lwayo oluqhelekileyo olufanekisela iVelika planina.
Ixhotyiswe ngekhitshi elincinci, itafile yokutyela kunye negumbi lokuhlambela elingenashawa. Kwindawo yokutyela kukho ibhedi elala abantu ababini. Igumbi lokulala eliphezulu linendawo yokulala ene-attic eneebhedi ezimbini ezinobukhulu bokumkanikazi.
IVelika planina lithafa lentaba kwiKamnik-Savinja Alps, malunga ne-1600 m ngaphezu komphakamo wolwandle. I-Big Pasture Plateau yindawo yabakhenkethi ebusika njengendawo yokuphumla kwe-ski kunye nehlobo njengendawo yokuhamba, ukuphumla kunye nokubonwa kwentlalo yendabuko. yabucala, isiqwenga, indawo entle kunye nemisebenzi yangaphandle..